Fifidianana solombavambahoaka :: Kandidan’ny antoko ADN ao Avaradrano i Tatie Vololona • AoRaha
Fifidianana solombavambahoaka Kandidan’ny antoko ADN ao Avaradrano i Tatie Vololona
Hitondra fijery vaovao ka hiala amin’ny fanaovana politika mahazatra hatramin’izay no tanjon’ ny antoko Antoka sy Dinan’ny Nosy (ADN). Amin’ity fifidianana solombavambahoaka ity, i Tatie Vololona na Ramaroson Rahelivololona Victorine no natolotry ny antoko ao amin’ny distrikan’ Avaradrano. Tafapetraka, omaly, teny amin’ny rafitra mpanamarina ny fandraisana an-tsoratra ny firotsahan- kofidiana Ovec) teny Nanisana ny antontan- taratasy mikasika izany.
Ho an’i Tatie Vololona, dia hifantohan’ny fandaharanasany ny fiarovana ny zon’ny vehivavy. “Fotoana izao tokony handraisan’ny vehivavy andraikitra amin’ny fampandrosoana ny firenena. Hanainga ny vehivavy rehetra eto amin’ ny faritra Avaradrano aho mba handray andraikitra amin’izay satria be loatra ny fanilikilihana”, hoy ny fanazavany. Manana vina ihany koa izy hanarina ny fitondran-tenan’ny olom-boafidy izay voatsikera matetika teny anivon’ny Antenimieram-pirenena. “Tsy mety intsony ny depiote tsy manao afa-tsy manangan-tanana, tsy miasa raha tsy malety. Ny fahamarinana izao no tsy maintsy hijoroana”, hoy
i Tatie Vololona. Ankoatra io, ezaka iray himasoana ihany koa ny fanarenana ny lesoka eo amin’ny fananantany.
Tafiditra ao anatin’ny foto-kevitra Fanorenana ifotony izay ilofosan’ny antoko ADN tarihin’ny mpitari-dalana nasionaly Edgard Razafindravahy avokoa ireo vina hoentin’ ny kandida Tatie Vololona eny Avaradrano ireo.
Raharaha Razaimamonjy Claudine Nandà ny fiampangana azy ireo voampanga
Fifidianana depiote :: Manodidina ny dimanjato ireo nirotsaka ho kandidà
Ho tian-kano tsy tian-kano
Fampiasan-kery Mpanao gazety roa niharan’ny herisetran’ny polisy